ONIVERSITE HPI-MASCA: Tsy miandry fahavitan’ny taom-pianarana vao manao “stage”. | Canalnews Madagascar
Home A LA UNE ONIVERSITE HPI-MASCA: Tsy miandry fahavitan’ny taom-pianarana vao manao “stage”.
By Nirinasept 05, 2017, 07:04 0
Isam-bolana ny mpianatra manaraka ny lalam-piofanana Paramed, ao amin’ny Oniversite HPI- MASCA Sabotsy Namehana dia manao fampiharana ny lesona. “Saro-pady ny asan’ny infirmier sy ny sage femme ka izany no hanosehana ireo mpianatra hanao fanazaran’asa dieny mbola mianatra”, hoy Haingo VOLOLOMBOAHIRANA, tomponandraikitra ao amin’ny HPI.
Ankoatra izany, ahitana lalam-piofanana Communication sy multimedia ary agronomie ao amin’ny HPI. Ho fanamafisana ny fahaizan’ny mpianatra, miara-miasa amin’ireo orinasa miompana amin’ny tontolo ambanivohitra ny oniversite. “Ho mora amin’ireo mpianatra ao amin’ny “ agronomie” ny miatrika ny asany rehefa tonga ny fotoana satria efa voasedra tamin’ny fanazaran’asa”.
Efa manomboka ny fisoratana anarana amin’ny taom-pianarana vaovao.
Previous PostONIVERSITE GSI: Manampy ny mpianatra amin’ny alalan’ny vatsim-pianarana. Next PostSOANIERANA: Noroahina tsy misy taratasy fampandrenesana akory.